Knowledge Archives - Pop Ping Myanmar
Knowledge August 8, 2020
အဆိုတော် ခင်ဝမ်း နဲ့ ခင်မောင်တိုး တို့သီဆိုခဲ့ကြတဲ့ “ဆယ်လ်မွန်ငါးတို့အပြန်” ဆိုတဲ့သီချင်းလေးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်
“ဆယ်လ်မွန်ငါးတို့အပြန်”ဆယ်လ်မွန်ငါးတွေဟာ ရေချိုမှာမွေးဖွားပြီး ရေငံ(ပင်လယ်)မှာကြီးပြင်းတဲ့ငါးမျိုးဖြစ်တယ်… မိခင်ဆယ်လ်မွန်ငါးဥမှ (၃)လကြာမှာ ငါးသားလောင်းတွေအဖြစ်ထွက်လာပါတယ်..ရေချိုမှာ ပျမ်းမျှ(၂)နှစ်ခန့် ကြီးထွားအောင်နေပြီးမှ ပင်လယ်ပြင်ကြီးဆီထွက်လာပါတယ်.. ပင်လယ်ပြင်မှာ (၃)နှစ်ကြာရင် ကြင်ဖေါ်ရှာပြီး မိမိတို့မွေးဖွားရာ ရေချိုအရပ်ဆီကိုပြန်ကြပါတယ်..တချို့ဆယ်လ်မွန်တွေကတော့ ကြင်ဖေါ်မတွေ့နိုင်ပဲ ပင်လယ်သမုဒ္ဓရာထဲ (၅)နှစ်အထိကြာတတ်ပါတယ်..ဒီကြားထဲမှာတော့ လူသားတွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတာမျိုးရှိပြီး မွေးရပ်ပြန်မျိုးဆက်မပွားနိုင်တာလည်းများတယ်.. သုတေသီတို့တွေ့ရှိချက်အရ (၁၀)%သာ မွေးရပ်ပြန်မျိုးပွားနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဆယ်လ်မွန်ငါးတို့ရဲ့ အပြန်ခရီးဟာ မိုင်ပေါင်း(၂၀၀၀)လောက်ရှိကြတယ်တဲ့.. ချစ်ဖေါ်နဲ့လက်တွဲမျိုးဆက်သစ်မွေးဖွားဖို့ အပြန်ခရီးစတင်ပြီဆိုတာနဲ့ ဆယ်လ်မွန်စုံတွဲဟာ လုံးဝအစာမစားတော့ပါ…..အဲလိုနဲ့ မိမိတို့မွေးဖွားရာအရပ်ရောက်ရင် ဆယ်လ်မွန်ငါးတို့ ချစ်ရည်လူးပြီး အမဖြစ်သူဟာ ဥချရန် ၎င်းရဲ့အမြီးနဲ့ ကျောက်စရစ်သားကိုတူးဆွပြီး…
ဂျော့ဘုရင်ကို ပေးခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် မှတ်တမ်းဝင် အလောင်းမင်းတရားကြီး၏ ရွှေပေလွှာ
၁၇၅၆ ခုနှစ် မေလ ၇ ရက်နေ့တွင် တတိယမြန်မာနိုင်ငံ ထူထောင်သူ အလောင်းမင်းတရားကြီးသည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံဘုရင် ဖြစ်သည့် ဒုတိယမြောက် ဂျော့ဘုရင်ထံ ချစ်ကြည်ရေးအဖြစ် ရွှေပေလွှာ တရွက်ကို ပေးပို့ စေခဲ့ပါတယ်။ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော ရွှေအစစ်ကို ပါးလွှာအောင် အပြားခတ်ထားပြီး အလျား ၅၅ စင်တီမီတာ၊ အနံ ၁၂ စင်တီမီတာရှိ ပေရွက်ပုံသဏ္ဍာန် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ရွှေပေလွှာပေါ်တွင် မြန်မာစာဖြင့် စာကြောင်း ၁၀ ကြောင်း…
၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီး ဘယ်လိုစဖြစ်ခဲ့လဲ? ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့လဲ? (သမိုင်းအမှန်)
၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံကို စစ်အာဏာရှင် ကာလတလျောက်လုံး လူသတ်၊ ခေါင်းဖြတ်၊ မင်းမဲ့ စရိုက် ကြီးစိုးတဲ့ ဖြစ်ရပ်အဖြစ် ပုံဖေါ်ခဲ့ကြတယ်။ အရေးတော်ပုံ (အရေးအခင်းလို့ သိမ်ငယ်အောင် ဖေါ်ပြခဲ့ကြတယ်) စတင်တာကိုလည်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ လူငယ်တွေ ရန်ဖြစ်ရာက စတယ်ဆိုပြီး ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလိုလို ဝါဒ ဖြန့်ခဲ့ကြတယ်။ အင်မတန် ကြီးမား ကျယ်ပြန့်တဲ့ အရေးတော်ပုံကြီးကို ဒီစတေးတပ်နဲ့ ခြုံမပြောနိုင်ပေမယ့် အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းတွေကို (အကြောင်းရင်းနဲ့ တကွ) ဟိုက်လိုက်…
Knowledge August 7, 2020
အပြင်မှာ တကယ်ရှိခဲ့တဲ့ ဆင်လိမ္မာကလေး ဂျမ်ဘို အကြောင်း
ဂျမ်ဘို ဆိုတဲ့နာမည်ကို ယနေ့ထိတိုင် ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးမှာ တံဆိပ်တပ်ရောင်းချလျှက်ရှိတာကြောင့်တော်တော်များများ ကြားဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဆင်တကောင်ရဲ့ နာမည်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပေမယ့် သူ့အကြောင်းကိုတော့ သိသူနည်းမယ်ထင်ပါတယ်။ မသိသေးတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် တခေတ်တခါက အလွန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဆင်ကလေးဂျမ်ဘိုရဲ့ အကြောင်းကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ဂျမ်ဘို ဟာ အာဖရိကဆင်အမျိုးအစားတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီး စည်းကမ်းလိုက်နာမှုနဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးမှာ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ထက်ပိုမိုသာလွန်ကြောင်းကိုသူရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကသက်သေပြလျက်ရှိပါတယ်။ ဂျမ်ဘို ဟာသူကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ကလေးသူငယ်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စရာအခိုက်အတန့်များစွာဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာလန်ဒန် နဲ့၊တောင်အမေရိကတိုက်တိရစ္ဆာန်ရုံတွေအတွင်းလှည့်လည်ကျက်စားခဲ့ကာ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ထက်များစွာသာလွန်တဲ့စွမ်းရည်တွေပြသကာလာရောက်သူအပေါင်းရဲ့အာရုံကိုစွဲဆောင် နိုင်စွမ်းကြီးလွန်းသူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တနည်းပြောရရင်တော့ ဂျမ်ဘိုဟာညတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်ပေမဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဖျော်ဖြေရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျမ်ဘို ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့သူတွေကတော့ အာရေဗီအမဲလိုက်သမားတွေဖြစ်ကြပြီး…
အမေစုလုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့ ဒီသတင်းကိုသိချင်နေတာကြာခဲ့ပြီ ခုတော့ သိလိုက်ရသောအခါ(ဒီပဲယင်း အဖြစ်အပျက် ပြန်လည် ဖေါ်ပြချက်)
#အမေစုလုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့_ဒီသတင်းကို_သိချင်နေတာကြာခဲ့ပြီ_ခုတော့_သိလိုက်ရသောအခါ_အသားတွေတောင်_တုန်တယ်ဘယ်သူတွေကလုပ်ကြံပြီးဘယ်သူတွေကကာကွယ်ခဲ့သလဲ။သမိုင်းအမှန်တွေ.“ဒါ_ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်_ကားနော်_မင်းတို့_သမိုင်းဝင်သွားမယ်”(ဒီပဲယင်း အဖြစ်အပျက် ပြန်လည် ဖေါ်ပြချက်)၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှုသည် ယနေ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေ ၃၀ တွင် ၁၄ နှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ထိုစဉ်က လုပ်ကြံခံရသူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူနေပြီး ထိုစဉ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ကားကို မောင်းခဲ့သူ ဒုတိယနှစ် ဥပဒေကျောင်းသား ကိုကျော်စိုးလင်းသည် ယခုအချိန်တွင် မန္တလေးတိုင်း ပြည်ကြီးတံခွန်မဲဆန္ဒနယ်၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးကျော်စိုးလင်း ဖြစ်လာခဲ့ပြီ။ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီဝင်လည်းဖြစ်သည့် ဦးကျော်စိုးလင်း၏ အတွေ့အကြုံကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလက…
Knowledge August 4, 2020
အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်ခင်မှာ ဆရာဝန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့အသက်ငယ်ဆုံးဆရာဝန်
ကမ္ဘာကျော်ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းအရ ကမ္ဘာ့အသက်ငယ်ဆုံးဆရာဝန်စံချိန်ကိုတော့ ၁၉၉၅ခုနှစ် မေလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစံချိန်ကိုတင်ခဲ့သူကတော့ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား Balamurali Ambati ဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်ဘွဲ့ရတဲ့အချိန်က သူ့ရဲ့အသက်ဟာ ၁၇နှစ် နဲ့ ၂၉၄ရက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။သူ့ကို ၁၉၇၇ ခုနှစ်က စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ဖခင်ဖြစ်သူ နဲ့ သင်္ချာဆရာမ မိခင် တို့က အိန္ဒိယနိုင်ငံ Vellore မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဉာဏ်အလွန်ကောင်းခဲ့ပြီး အသက် ၄နှစ်မှာ ရှုပ်ထွေးတဲ့သင်္ချာတွေကို…
Knowledge August 3, 2020
ဗြိတိသျှတို့ ပြည်မြို့ကဖြုတ်ယူသွားခဲ့တဲ့ ပြာသာဒ်တော်ကြီး
မွန်ဘာသာဖြင့်ရေးထိုးထားသော ပြည်မြို့ရွှေဆံတော်ဘုရားကျောက်စာအရ သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးသည် ပြည်မြို့ကမ်းနဖူးတွင် ရွှေမုဌောဘွဲ့ဖြင့်စေတီတည်ခဲ့ပြီး ရွှေကျောင်းကြီးစေတီဘွဲ့ဖြင့် ထင်ရှားသည်။ နောင်တွင် မြတ်ချစ်ရှင်ဟု ဘွဲ့တော်ပြောင်းသည်။သက္ကရာဇ် ၈၉၄ တွင် ပြည်ဘုရင်နရပတိမင်းကြီးက မြတ်ချစ်ရှင် စေတီတော်ကြီး၏ တောင်ဘက်တွင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှပသော ဘုရားတန်ဆောင်း ရွှေကျောင်းကြီးပြသာဒ်တော်ကို ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းသည်။ခရစ်နှစ် ၁၈၂၅ ခုနှစ်တွင် ပထမ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် စစ်ပွဲဖြစ်ပွားသည်။ ရွှေကျောင်းကြီးစေတီတော်နှင့် ပြသာဒ်တော်ကြီး ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည်။ ပြည်ဘုရင် သတိုးမင်းဖျားက ပဉ္စမအကြိမ် ပြုပြင်သည်။ ဘုရားအာရုံခံတန်ဆောင်း ဘုံခုနှစ်ဆင့် ပြသာဒ်တော်သစ်ကြီးအဖြစ်…
Knowledge August 1, 2020
ငွေသုံးသိန်း ရှိတယ် ဘာရင်းနှီး ရင် ကောင်းမ လဲ အရမ်းကောင်း တဲ့ Idea လေးပါ သိပ်ေ ကာင်းတဲ့ idea တစ်ခုကို မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ်။ အရင်းဆုံ ကိစ္စမတင်ပြခင် ပြောပြသင့်တဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခု ရှိပါတယ် …။ စတိမ့်ဖော့်(Stanford) တက္ကသိုလ် ကကျောင်းဆရာမ ဖြစ်သူ တီနာ ဇီးလစ်(Tina seelig) ဟာကျောင်းသား/သူတွေကို စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုပြုလုပ် လိုက်ပါတယ်။…
Knowledge July 27, 2020
မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရုတ်တွေ ဖျောက်ထားတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတချို့ ရှည်လျား ကျယ်ပြောသော နယ်နိမိတ် ထိ စပ်မှု သည် မြန်မာပြည် နှင့် တရုတ်ပြည် အကြား နှစ်ပရိစေဒ ကြာမြင့်စွာ ပြဿ နာ အလျည်း မရှိပဲ ခွဲခြား တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ မင် မင်းဆက် (၁၃၈၀-၁၃၈၈ အေဒီ) လက်ထက် တွင် တရုတ် တို့သည် ယူနန် နယ် အား ၎င်း…
တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်ကြားမှာ မြန်မာ ကြားညပ်နေရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း
တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်ကြားမှာ မြန်မာ ကြားညပ်နေရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း ယနေ့လိုင်းပေါ်မှာ တင်နေတဲ့ သတင်းတွေထဲမှာ တရုပ်နဲ့ အမေရိကန်ပြဿနာမှာ မြန်မာပြည်က ကြားညပ်နေတာ ဘာညာနဲ့ တွေ့နေရတယ်.။ ယခု တရုပ်အရေးက မြန်မာကြားညပ်မယ်ဆိုတာ ကြားညပ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တို့နှင့် အပေါင်းအပါတွေရဲ့ တကိုယ်ကောင်းဆန် လောဘစိတ်တွေကြောင့်ပဲလို့ အရင်ပြောပါရစေ.။ အမေရိကန်နဲ့ တရုပ်ရဲ့အရေးဟာ. တစ်ဖြေးဖြေးခြင်း ကြီးထွားလာတော့ စစ်အာဏာရူးတွေအတွက်တော့ အခက်တွေ့လာတာ အမှန်ပါပဲ.။ လူမသိအောင် လုပ်ထားတဲ့ ကိစ္စတစ်ချို့ ဗူးပေါ်သလို…